အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရများ - Myanmar Network
အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရများ
Posted by Language Republic on August 7, 2015 at 12:13 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အိပ်စက်ခြင်းဆိုတာ လူတို့ နေ့တိုင်းမဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာ၊ ရေးစရာရှိရင် အထောက်အကူရနိုင်မဲ့ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဝေါဟာရသင်ခန်းစာများအားလုံး ထုံးစံအတိုင်း လက်တွေ့ပြန်သုံးမှသာ မှတ်မိမှာမို့ ဖတ်ပြီးသွားရင် နမူနာစာကြောင်းလေးတွေ comment ရေးခဲ့ရင် ပိုပြီး နားစွဲသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။
Sleep isatime when the mind and the body getanecessary rest period. Most people get seven to eight hours of sleep every night.
(စိတ်ရောကိုယ်ပါ လိုအပ်တဲ့ အနားယူချိန်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုသည် ညတိုင်း (၇)နာရီ မှ (၈)နာရီအထိ အိပ်ကြပါတယ်။)
Nighttime (ည ကာလ)
Nighttime isatime for sleep. (အိပ်ရမည့်ညအချိန်ကို nighttime ဟု ခေါ်ပါတယ်။)
Pleasant thoughts and images in the mind happen duringadream whileaperson sleeps. (လူတစ်ဦးတစ်ယောက် အိပ်နေစဉ် အိပ်မက် မက်ပါက စိတ်ထဲတွင် နှစ်သက်စရာကောင်းသော အတွေးများနှင့် ပုံရိပ်များ ပေါ်လာပါတယ်။)
အိပ်မက်က မနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်နေပါက ၄င်းကို nightmare လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အိမ်မက်ဆိုးတွေကို နောက်တစ်မျိုး လွယ်လွယ်ခေါ်လို့ရတာကတော့ bad dream လို့ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့အချိန်မှာ အိပ်မက် မက်သူကို စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက် မက်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နိုးနေတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ကူးနေတာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်အိပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။)
He's daydreaming of rock stardom. (သူက လူထုအသည်းစွဲတဲ့ ရော့ခ်အဆိုတော်အဖြစ်ကို စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက် မက်နေတယ်။)
A bed is the place whereaperson sleeps. A bed usually consists of the following:amattress, sheets,ablanket or comforter, andapillow. (ကုတင်ဆိုတာကတော့ လူတစ်ယောက် အိပ်သောနေရာဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် မွေ့ရာ၊ အိပ်ရာခင်းများ၊ စောင် (သို့) ဂွမ်းကပ်နှင့် ခေါင်းအုံးတို့ပါ ရှိ်ပါတယ်။)
Your head rests onapillow. (အိပ်ရာထဲ၌ ခေါင်းကိုတင်သော အရာကို ခေါင်းအုံးလို့ ခေါ်ပါတယ်။)
in bed (အိပ်ရာဝင်သည်)
Whenaperson gets into bed to go to sleep, he or she is in bed. (လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က အိပ်ရန် ကုတင်ပေါ်တက်တာ (သို့) အိပ်ရာနေရာသို့ သွားရောက်တာကို အိပ်ရာဝင်သည်ဟု ခေါ်ပါတယ်။
A baby sleeps inacrib. (ခလေးငယ်များက ကလေးကုတင်မှာ အိပ်ပါတယ်။)
A baby might sleep inacradle, but these are not as popular as they once were due to safety concerns. (ကလေးငယ်လေးဟာ လွှဲလို့ရတဲ့ ပုခက်ထဲမှာ အိပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၄င်းတို့ဟာ အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့် ယခုအခါမှာ အရင်ကလောက်တော့ ခေတ်မစားတော့ပါဘူး။)
bunk beds (နှစ်ထပ်ကုတင်)
When beds are stacked on top of each other, they're referred to as bunk beds. Bunk beds save on space inaroom. (ကုတင်များကို တစ်ခုပေါ်တစ်ခု ဆင့်ထားရင်တော့ ၄င်းတို့ကို bunk beds ဟု ခေါ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ဟာ နေရာစား သက်သာစေပါတယ်။)
A hammock is used for sleeping or resting outside. It usually hangs between two trees. (ကြိုးပုခက်ကို အိမ်အပြင်မှာ အိပ်ရန် (သို့) နားရန် အသုံးပြုပါတယ်။ အများအားဖြင့် သစ်ပင် နှစ်ပင်ကြားမှာ တပ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။)
Nightgown (အမျိုးသမီး ညအိပ်ဂါဝန်ရှည်)
Some women wearanightgown to bed. (တချို့အမျိုးသမီးများသည် ညအိပ်ဂါဝန်ရှည်ကို ၀တ်အိပ်ကြပါတယ်။)
Pajamas (အိပ်ရာဝင်ဝတ်စုံ၊ ညဝတ် ဝတ်စုံ)
Pajamas may be worn to bed by children or adults, women or men. (အိပ်ရာဝင်ဝတ်စုံ၊ ညဝတ် ဝတ်စုံကို ခလေး၊ လူကြီး၊ ကျားမ မရွေး ၀တ်နိုင်ပါတယ်။)
Slippers (အိမ်တွင်းစီး ဖိနပ်)
Slippers are shoes that some people wear around the house while wearing pajamas oranightgown. (အိမ်မှာ နေရင်း အိပ်ရာဝင်ဝတ်စုံ (သို့) ညအိပ်ဝတ်ဂါဝါရှည် ၀တ်ထားတဲ့အခါ စီးသော ကွင်းထိုးဖိနပ်ဖြစ်ပါ တယ်။)
Sleepwalk (အိပ်ပျော်နေစဉ် ယောင်၍ လမ်းထလျှောက်ခြင်း)
A person who walks or gets up while sleeping is said to be sleepwalking. (အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာ ယောင်ပြီး လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။)
sayaprayer (ဘုရားရှိခိုးသည်။)
Some people sayaprayer before they go to sleep. (တချို့သူများက အိပ်ရာမ၀င်ခင် ဘုရားရှိခိုးကြပါသည်။)
the middle of the night (ညလယ်ခေါင်၊ သန်းခေါင်ယံချိန်)
Sometimes sleep is disturbed andaperson must wake up. The middle of the night occurs whenaperson would normally be sleeping, roughly between 1 a.m. to4a.m. (ညလယ်ခေါင်ကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် လူတစ်ယောက် အိပ်ပျော်နေရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် နံနက်စောစော (၁)နာရီ နှင့် (၄)နာရီကြား ဖြစ်ပါတယ်။)
Insomnia (အိပ်မပျော်သောရောဂါ / မျက်စိကြောင်ခြင်း)
A person who can't get to sleep has insomnia. This can beamental or physical condition. Sometimes insomnia has external causes beyondaperson's control. (ညအိပ်မပျော်နိုင်သူမှာ insomnia ဖြစ်နေပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ၄င်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံကျတော့ insomnia သည် လူက မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ပြင်ပအကြောင်းတရားတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။)
alarm clock (နှိုးစက်နာရီ)
An alarm clock goes off in the morning and wakes people from sleep. (နာရီနှိုးစက်သည် မနက်မှာ မြည်၍ လူတွေကို အိပ်ရာမှ နိုးစေပါတယ်။)
yawn and stretch (သမ်း၍ ခြေ၊ လက်ဆန့်ခြင်း)
Whenaperson wakes up in the morning, it's natural to yawn (open the mouth wide) and stretch (extend the arms and legs). (လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က မနက်အိပ်ရာမှ နိုးတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ချင်တဲ့အခါ သမ်းဝေပြီး ခြေ၊ လက်ဆန့်တာက သဘာဝကျပါတယ်။)
Sleepy (အိပ်ချင်သော၊ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်သော)
People may feel sleepy or tired in the morning if they don't get enough sleep. (လူတွေက ညက လုံလုံလောက်လောက် မအိပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် မနက်ကျတော့ အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။)
night owl (ညမအိပ်သူ)
A person who doesn't go to sleep at night or who works at night when he or she should be sleeping is calledanight owl. (ညအိပ်ပျော်နေရမည့်အချိန်မှာ မအိပ်သောသူ (သို့) အလုပ်လုပ်သောသူကို night owl ဟု ခေါ်ပါသည်။ မြန်မာလိုမှာလည်း ဒါမျိုးလူတွေကို "ဇီးကွက်" လို့ခေါ်တာ ကြားဖူးကြမှာပါ။)
လူတိုင်းအတွက်ကတော့ ညမှာ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Learnamericanenglishonline.com မှ Sleep Vocabulary ကို ကိုးကာဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အိပျစကျခွငျးဆိုတာ လူတို့ နတေို့ငျးမဖွဈမနလေုပျရတဲ့ အရာတဈခုပါ။ ဒီသငျခနျးစာမှာ အိပျစကျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး ပွောစရာ၊ ရေးစရာရှိရငျ အထောကျအကူရနိုငျမဲ့ ဝေါဟာရအသုံးအနှုနျးမြားကို ပွညျ့စုံစှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဝေါဟာရသငျခနျးစာမြားအားလုံး ထုံးစံအတိုငျး လကျတှပွေ့နျသုံးမှသာ မှတျမိမှာမို့ ဖတျပွီးသှားရငျ နမူနာစာကွောငျးလေးတှေ comment ရေးခဲ့ရငျ ပိုပွီး နားစှဲသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ အကွံပွုပါတယျ။
(စိတျရောကိုယျပါ လိုအပျတဲ့ အနားယူခြိနျကို ချေါခွငျးဖွဈပါတယျ။ လူအမြားစုသညျ ညတိုငျး (၇)နာရီ မှ (၈)နာရီအထိ အိပျကွပါတယျ။)
Nighttime isatime for sleep. (အိပျရမညျ့ညအခြိနျကို nighttime ဟု ချေါပါတယျ။)
Pleasant thoughts and images in the mind happen duringadream whileaperson sleeps. (လူတဈဦးတဈယောကျ အိပျနစေဉျ အိပျမကျ မကျပါက စိတျထဲတှငျ နှဈသကျစရာကောငျးသော အတှေးမြားနှငျ့ ပုံရိပျမြား ပျေါလာပါတယျ။)
အိပျမကျက မနှဈသကျဖှယျရာဖွဈနပေါက ၄ငျးကို nightmare လို့ ချေါပါတယျ။ အိမျမကျဆိုးတှကေို နောကျတဈမြိုး လှယျလှယျချေါလို့ရတာကတော့ bad dream လို့ဖွဈပါတယျ။
နအေ့ခြိနျမှာ အိပျမကျ မကျသူကို စိတျကူးယဉျအိပျမကျ မကျနတေယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ လူတဈယောကျနိုးနတေဲ့ အခြိနျမှာ စိတျကူးနတောကို ပွောတာဖွဈပါတယျ။ တကယျအိပျတာ မဟုတျပါဘူး။)
He's daydreaming of rock stardom. (သူက လူထုအသညျးစှဲတဲ့ ရော့ချအဆိုတျောအဖွဈကို စိတျကူးယဉျအိပျမကျ မကျနတေယျ။)
A bed is the place whereaperson sleeps. A bed usually consists of the following:amattress, sheets,ablanket or comforter, andapillow. (ကုတငျဆိုတာကတော့ လူတဈယောကျ အိပျသောနရောဖွဈပါတယျ။ အိပျရာမှာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ မှရေ့ာ၊ အိပျရာခငျးမြား၊ စောငျ (သို့) ဂှမျးကပျနှငျ့ ခေါငျးအုံးတို့ပါ ရျှိပါတယျ။)
Your head rests onapillow. (အိပျရာထဲ၌ ခေါငျးကိုတငျသော အရာကို ခေါငျးအုံးလို့ ချေါပါတယျ။)
in bed (အိပျရာဝငျသညျ)
Whenaperson gets into bed to go to sleep, he or she is in bed. (လူတဈဦးတဈယောကျက အိပျရနျ ကုတငျပျေါတကျတာ (သို့) အိပျရာနရောသို့ သှားရောကျတာကို အိပျရာဝငျသညျဟု ချေါပါတယျ။
A baby sleeps inacrib. (ခလေးငယျမြားက ကလေးကုတငျမှာ အိပျပါတယျ။)
A baby might sleep inacradle, but these are not as popular as they once were due to safety concerns. (ကလေးငယျလေးဟာ လှဲလို့ရတဲ့ ပုခကျထဲမှာ အိပျနျိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ၄ငျးတို့ဟာ အန်တရာယျရှိတာကွောငျ့ ယခုအခါမှာ အရငျကလောကျတော့ ခတျေမစားတော့ပါဘူး။)
bunk beds (နှဈထပျကုတငျ)
When beds are stacked on top of each other, they're referred to as bunk beds. Bunk beds save on space inaroom. (ကုတငျမြားကို တဈခုပျေါတဈခု ဆငျ့ထားရငျတော့ ၄ငျးတို့ကို bunk beds ဟု ချေါပါတယျ။ ၄ငျးတို့ဟာ နရောစား သကျသာစပေါတယျ။)
A hammock is used for sleeping or resting outside. It usually hangs between two trees. (ကွိုးပုခကျကို အိမျအပွငျမှာ အိပျရနျ (သို့) နားရနျ အသုံးပွုပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ သဈပငျ နှဈပငျကွားမှာ တပျဆငျလရှေိ့ပါတယျ။)
Nightgown (အမြိုးသမီး ညအိပျဂါဝနျရှညျ)
Some women wearanightgown to bed. (တခြို့အမြိုးသမီးမြားသညျ ညအိပျဂါဝနျရှညျကို ၀တျအိပျကွပါတယျ။)
Pajamas (အိပျရာဝငျဝတျစုံ၊ ညဝတျ ဝတျစုံ)
Pajamas may be worn to bed by children or adults, women or men. (အိပျရာဝငျဝတျစုံ၊ ညဝတျ ဝတျစုံကို ခလေး၊ လူကွီး၊ ကြားမ မရှေး ၀တျနိုငျပါတယျ။)
Slippers (အိမျတှငျးစီး ဖိနပျ)
Slippers are shoes that some people wear around the house while wearing pajamas oranightgown. (အိမျမှာ နရေငျး အိပျရာဝငျဝတျစုံ (သို့) ညအိပျဝတျဂါဝါရှညျ ၀တျထားတဲ့အခါ စီးသော ကှငျးထိုးဖိနပျဖွဈပါ တယျ။)
Sleepwalk (အိပျပြျောနစေဉျ ယောငျ၍ လမျးထလြှောကျခွငျး)
A person who walks or gets up while sleeping is said to be sleepwalking. (အိပျပြျောနတေုနျးမှာ ယောငျပွီး လမျးလြှောကျခွငျးကို ဆိုလိုပါတယျ။)
sayaprayer (ဘုရားရှိခိုးသညျ။)
Some people sayaprayer before they go to sleep. (တခြို့သူမြားက အိပျရာမဝငျခငျ ဘုရားရှိခိုးကွပါသညျ။)
the middle of the night (ညလယျခေါငျ၊ သနျးခေါငျယံခြိနျ)
Sometimes sleep is disturbed andaperson must wake up. The middle of the night occurs whenaperson would normally be sleeping, roughly between 1 a.m. to4a.m. (ညလယျခေါငျကတော့ ပုံမှနျအားဖွငျ့ လူတဈယောကျ အိပျပြျောနရေမယျ့ အခြိနျဖွဈပါတယျ။ အကွမျးအားဖွငျ့ နံနကျစောစော (၁)နာရီ နှငျ့ (၄)နာရီကွား ဖွဈပါတယျ။)
Insomnia (အိပျမပြျောသောရောဂါ / မကျြစိကွောငျခွငျး)
A person who can't get to sleep has insomnia. This can beamental or physical condition. Sometimes insomnia has external causes beyondaperson's control. (ညအိပျမပြျောနိုငျသူမှာ insomnia ဖွဈနပေါတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ၄ငျးဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ (သို့မဟုတျ) ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အခွအေနကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တဈခါတရံကတြော့ insomnia သညျ လူက မထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ ပွငျပအကွောငျးတရားတှကွေောငျ့ ဖွဈတတျပါတယျ။)
alarm clock (နှိုးစကျနာရီ)
An alarm clock goes off in the morning and wakes people from sleep. (နာရီနှိုးစကျသညျ မနကျမှာ မွညျ၍ လူတှကေို အိပျရာမှ နိုးစပေါတယျ။)
yawn and stretch (သမျး၍ ခွေ၊ လကျဆနျ့ခွငျး)
Whenaperson wakes up in the morning, it's natural to yawn (open the mouth wide) and stretch (extend the arms and legs). (လူတဈဦးတဈယောကျက မနကျအိပျရာမှ နိုးတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတျ အိပျခငျြတဲ့အခါ သမျးဝပွေီး ခွေ၊ လကျဆနျ့တာက သဘာဝကပြါတယျ။)
Sleepy (အိပျခငျြသော၊ အိပျခငျြမူးတူးဖွဈသော)
People may feel sleepy or tired in the morning if they don't get enough sleep. (လူတှကေ ညက လုံလုံလောကျလောကျ မအိပျခဲ့ရတဲ့အတှကျ မနကျကတြော့ အိပျခငျြမူးတူး ဖွဈနေ တတျပါတယျ။)
night owl (ညမအိပျသူ)
A person who doesn't go to sleep at night or who works at night when he or she should be sleeping is calledanight owl. (ညအိပျပြျောနရေမညျ့အခြိနျမှာ မအိပျသောသူ (သို့) အလုပျလုပျသောသူကို night owl ဟု ချေါပါသညျ။ မွနျမာလိုမှာလညျး ဒါမြိုးလူတှကေို "ဇီးကှကျ" လို့ချေါတာ ကွားဖူးကွမှာပါ။)
လူတိုငျးအတှကျကတော့ ညမှာ ကောငျးကောငျး အိပျပြျောဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
Learnamericanenglishonline.com မှ Sleep Vocabulary ကို ကိုးကာဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Myo Myo Htet on August 7, 2015 at 21:22
Some people work in nighttime as in night shifts of work.
Dreams can be good(sweet dreams)or bad(nightmare).
In some villages,there are hammocks used for resting outside.
My grandmother has an insomnia.
Most of the youngsters are night owls.
Permalink Reply by Cho Mayoo on August 8, 2015 at 0:16
To beagood healthy person in social life;it is necessary to get enough sleep every night.
Foraperson; his regular nightime should be at 10:00pm.
I am always in bed at 10:30pm and my alarm clock goes off at 6:00am.
Before I go to sleep;I usually sayaprayer.
Whileaperson sleeps;he may have either dream or nightmare.But daydream happens at the day time when he wakes up.
Eg.Mg Mya is daydreaming of being a
famous super star actor.
Sometimes;some people can even be sleepwalking ;insomnia or night owl at the middle of the night.
So;they may feel yawning and stretching when they wake up.
Nowadays;baby crib is more popular than cradle because of safety.
However;hammock is also still used for sleeping or resting outside in some villages.
In city;bunk beds are more useful to save on space inaroom.
Most of the people in city like wearing pajamas;nightgown and slippers to bed.
I think it is also important to have soft pillow in bed so that we can sleep soundly.